Nandritra ny famotorana tao anatin’izay andro vitsy izay no nahalalana, araka ny fampitam-baovaon’ny zandary hatrany fa sakaizan’ny mpanambady taloha ihany ilay nanindrona antsy nandritra ny « bal » ka nahafaty an’io tovolahy vao vita mariazy io. Tao amin’ny kaominina Miandrarivo, distrikan’i Tsiroanomandidy, Faritra Bongolava no nitranga ny loza. Ny alin’ny 12 aogositra, sahabo ho tamin’ny 11 ora alina tao anatin’ny alim-pandihizan’ny fifaliana tamin’ny fampiakarambady no niseho ny loza. Noho ny ratra nahazo ilay lehilahy tompon’ny fanasana dia tsy tana ny ainy na efa niezaka nitondra azy hihazo ny toeram-pitsaboana akaiky tany an-toerana aza ireo fianakaviana sy ny tany ama-monina. Avy nanindrona antsy ilay sipan’ny mpanambady taloha dia nanjavona avy hatrany. Ny teo an-toerana moa variana namonjy ilay lasibatra, ny faritra koa midadasika sady anaty haizina ka tsy nisy nahita ny nitsoahany.